Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya: Natiijada xaqiiqo raadintii xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo la sugayo – Radio Damal
Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa laga war sugayay dadaal ay dowladda Jabuuti ugu jirtay dajinta xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Guddii madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle u xil saaray xaqiiqo raadinta khilaafka ayaa hadda howshooda gabagabeeyay.
“Waxaan ku horreynay Muqdisho. Halkaas waxaan u tagnay si aan u soo ogaanno qodobka ku saabsan eedda ay Soomaaliya Kenya ugu jeedisay in ciidamo lagu soo carbinayo gudaha Kenya, laakiin madaxda Soomaalidu qodobkaas aan ka fileynay waxay kusii dareen afar qodob oo kale, shantaas qodobna waan ka diiwaan galinnay,” ayuu yidhi Danjire Yaasiin Cilmi Buux.
Markii ay Soomaaliya tageen guddigu waxay la kulmeen wasiiru dowladaha xukuumadda ee Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Balal Maxamed Cismaan, iyo xog hayihiisa joogtada ah, Maxamed Calo-Nuur Xaaji.
Danjire Buux ayaa sheegay in madaxweyne Geelle tallaaba uu qaadayo ay tahay in uu madaxda kale ee IGAD la wadaago xogta ay guddiga soo aruuriyeen.
Hase yeeshee Kenya ayaa dhankeeda rajeyneysa in natiijada xaqiiqo raadinta ah ay noqoto mid meesha ka saareysa eedeymaha Soomaaliya uga yimid.
Labada waddan ayaa sannadihii lasoo dhaafay uusan xiriir wanaagsan ka dhaxeynin tan iyo markii ay horaantii 2019-kii cirka isku shareertay xiisadda ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Kiis arrintaas ku aaddan ayaa hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda, oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee waddanka Netherlands.